Onye Uweojii akụgbuo agadi nwaanyị n’Akwa-Ibom | odumblog
Onye Uweojii akụgbuo agadi nwaanyị n’Akwa-Ibom
Odum Blog8 months agoNo comment
posted on Jan. 21, 2020 at 7:45 am January 21, 2020
Ozi si Breaking Times erute anyị ntị emeela ka a mara na otu onye uweojii nke isi ụlọọrụ ya dị n’ Akwa Ibom state Police Command akụgbuola otu agadi nwaanyị aha ya bụ Oriakụ Deborah Nkereuwem Nkpenie.
Na nkọwa nke ha, onye nọ ebe ya bụ mkpamkpa kpara gbasara ozi a n’igwe twitter ya.
N’okwu nke ya,
” Otu onye uweojii na-arụ na-Akwa-Ibom state Police Command, aha ya bụ Mr. Bassey Peter Ikpe; onye nnyocha ndị Uweojii (an Inspector of Police) akụgbuola agadi nwaanyị aha ya bụ Oriakụ Deborah Nkereuwem Nkpenie, nke foto ya na-egosi, ụbọchi Tọọzde Jenuwarị 16, 2020.”
”Nke a mere n’ụtụtụ ụbọchị ahụ, malitere n’ọkpụkpọ oku mmekpa ahụ ndị uweojii kpọrọ nwaanyị a nke osote onyeisi ndị uweojii n’ Akwa- Ibom amaghị maka ya.”
”Nwaanyị a nọ na Keke m n’ụtụtụ ahụ ka onye uweojii a bịara ịkpụrụ ya, ka onye uweojii na-adọ ya ka ọ dọpụta ya n’ime Keke, nwaanyi na-eti na ahụ esighi ya ike, onye uweojii adọgide ya were kụọ ya isi n’igwe dị n’ebe mbata keke m, nwaanyị adaa n’ala, iku ume na-esiri ya ike.”
”Onye uweojii a jụrụ ihapụ ya chee na ọ chọrọ ịghọgbu ya, onye uweojii gara n’ihu ka na-achọ ịdọpụta ya na Keke ma gwa ya na ya nwụọ ma ọ chọrọ ịnwụ.”
”Anyị rịọrọ ya ka ọ hapụ nwaanyị a mana ọ jụrụ ajụ; ọ dọkata nwaanyị a, mmadụ kwụsị ịnụ ihe nwaanyị a na-ekwuzi, anyị rịọrọ ya ka ebuga nwaanyị a ụlọọgwụ mgbe ọ ka na-eku ume mana o kweghi ruo ka nwaanyị a kubiri ume, o were nye iwu ka e buga ya ụlọọgwụ.”
Osote onyeisi ndị Uweojii na Akwa-Ibom akatọọla ajọ agwa ọtụtụ ndị uweojii ma nye ndụmọdụ ka ndị uweojii na-akpa ụdị agwa a wepụ aka enwe n’ofe maka ịghọrọ aka mmadụ.
Tags:Akwa-Ibom newsAkwaibom newsbreaking newsBreaking TimesnewsNigerian policeNigerian Police forcepolicePolice brutalitypolice kills womanrecent news
Odum Blog January 21, 2020
Nwaanyị atụfuo ejima ọ mụrụ ọhụrụ na Port Harcourt
Download Prophet Chukwuemeka Ohanaemere (Odumeje) – ALABASIDI